सबै लाग्ने हो भने १० वर्षमै देश धनी बनाउन सकिन्छ-सुशील प्रजापति
बेलायतमा रहेका नेपाली मात्र होइन बेलायती बीचमा पनि एउटा परिचित नाम हो, सुशील प्रजापति । बेलायतमा बसेर नेपाली नेवारी संस्कृतिको पहिचान, सम्बद्र्धन र संरक्षणमा लागेका प्रजापति नयाँ पुस्ताबीच आफ्नो सँस्कृतिको पहिचान गराउनु पर्ने र नयाँपुस्ता नै यसको संरक्षणमा लाग्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । बाबु विष्णुप्रसाद प्रजापति र आमा इन्द्रादेवि प्रजापतिका छोरा सुशील प्रजापति भक्तपुर नगरपालिकाको वडा नं १ तोलाछें टोलमा आजभन्दा ३३ वर्ष अगाडि जन्मिएका हुन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल एकाडेमी अफ टुरिजम एण्ड होटल म्यानेजमेन्ट रविभवनबाट ब्याचलर, साइप्रसबाट ब्याचलर अफ हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट र युनिभर्सिटी अफ अक्लोहामा सिटी अफ एडमन्ड अक्लोहामा अमेरिकाबाट २००८ मा एमबिए र युनिभर्सिटी अफ वेल्सबाट मार्केटिङमा एमबिए गरेका प्रजापति विगत ८ वर्षदेखि बेलायतमा छन् ।
सामाजिक रूपमा मात्र नभएर व्यवसायीका रूपमा पनि आफूलाई चिनाएका प्रजापतिले प्लमबस्टेड हाइ स्ट्रिट युकेमा रेडलाइन नुडल्स बार सञ्चालन गरेका छन् भने नेपालमा गोर्खा अग्र्यानिक फार्ममा लगानी गरेका छन् । गोर्खा अग्र्यानीक फार्मले सोलार इनर्जी, वाटर प्युरीफिकेशन लगायतका विषयमा लगानीको चासोसहित सम्भाव्यता र अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
भैरव नाच गुठीका अध्यक्ष, पासाः पुच गुठी साउथ लण्डन इस्ट इकाईका अध्यक्ष, युकेमा प्रोपर्टी इन्भेष्टमेन्टका लागि काम गरिरहेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट कोअपरेटिभ लिमिटेडका बोड अफ डाइरेक्टर, पल्यूल डायमण्ड बुद्धिष्ट मोनाष्ट्रीका सहकोषाध्यक्ष, नेपाल युथ एसोसियएन ग्रिनविचका कार्यकारी सदस्य तथा इन्टरनेशनल नेप्लीज आर्टिस्ट सोसाइटी यूकेका कार्यकारी सदस्य लगायत दर्जन बढी संघसंस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका प्रजापतिसँग ऐक्यबद्धताको वार्ता ः
बेलायतमा नेपालीको संख्या कति रहेको पाउनु भएको छ ?
यूकेमा अनुमानित झण्डै १ लाख नेपाली रहेका छौँ । त्यसमा व्रिटीश आर्मीहरू, व्यवसायीहरू, विद्यार्थीहरू र मजदुर पनि छौँ । पहिले विद्यार्थीहरूको संख्या धेरै नै थियो । यहाँको अध्यागमन कानुनका कारण अहिले १० हजारको हाराहारीमा विद्यार्थीहरू रहेको र घट्दै जाने क्रम जारी रहेको छ ।
बेलायतमा नेपालीहरू कुन–कुन क्षेत्रमा रहेको पाउनु भएको छ ?
पहिला पढ्न आउने विद्यार्थीको संख्या नै बढी थियो । तर, अहिले कानुनी अप्ठ्याराका कारण कम भएका छन् । यहाँ धेरै नेपालीहरूले रेष्टुरेण्ट व्यवसाय र ग्रोसरी चलाएर बसेको पाएको छु तर, यहाँ विविधता छ । भिन्न–भिन्न क्षेत्र र पेशाका नेपाली छौँ । नेपाली डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स, सिए, फेसन डिजाइनर, शिक्षक लगायतका विभिन्न पेशामा आबद्ध रहनु भएको छ ।
बेलायतमा रोजगारीका सम्भावना के–के छन् ?
तपाईलाई थाहा नै छ, हाम्रो देशमा होस या अन्य विदेशमा धेरैजसो दक्ष कामदारहरूकै आवश्यकता पर्छ । त्यसैले लो स्किल्ड भएकाहरूका लागि यहाँ गाह्रो छ । तर, हाइ स्किल्डका लागि तोकिएका पेशाहरूमा आवेदन दिन सकिन्छ, स्पोन्सर कम्पनीमार्फत । तर, यहि रहेका नेपाली नयाँ पुस्ताहरूले दक्षताको आधारमा कुनैपनि पेशामा लाग्न सक्छन् । यहाँ रोजगारीको सम्भावना बढी ब्रिटीश गोर्खा सेक्युरेटीमा छ । नेपालबाट आइरहेका पनि छन् ।
बेलायत युरोपियन युनियन (इयु) बाट अलग भएको छ, यसले नेपालीलाई फाइदा वा बेफाइदा के हुन्छ ?
यहाँ स्थायी बसोबास गर्ने नेपालीहरूको हकमा रोजगारीको सम्भावनाहरू बढेर गएका छन् । घर जग्गाको भाउ घट्न सक्छ । नयाँ घर किन्न नेपालीलाई केही राहत भएपनि बैंकको ब्याज बढ्ने सम्भावना बढ्न सक्ने देखिन्छ ।
यसका बेफाइदाहरू अस्थायी भिषामा बसोबास गरिरहेकाहरूलाई नयाँ नियमले गा¥हो पार्न सक्छ । नेपालबाट रोजगारीका लागि आवेदन दिनेहरूका लागि कडाइ हुने सम्भावना छ । वस्तुभाउको दर बढ्न सक्छ । युरोप जाँदा भिषा लिनुपर्ने हुनसक्छ । अर्कोकुरा नयाँ सरकारको नीति निर्माण नहुँदासम्म यसै भन्न सकिन्न ।
तपाई यतिधेरै संघसंस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ सबैको आफ्नै विशेषता होला, भैरव गुठीको उद्देश्य बताइदिनुहुन्छ की ?
भैरव गुठीले विशेष गरेर परम्परागत नेवारी संस्कृतिको सम्बद्र्धन गरिरहेको छ । यहाँ मात्र नभएर संसारभरी नै छरिएर रहेका नेवार समुदायलाई आफ्नो संस्कार र संस्कृतिको जर्गेना गर्न ऐक्यबद्ध हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । यसका अलावा देशमा भइपरी आउने प्राकृतिक विपत्ति र अन्य सामाजिक काममा सक्रिय भएर आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गरिरहेको छ । २०७२ बैशाख १२ को भूकम्पमा पनि आर्थिक राहत, डाक्टरहरूको टिम लगायत धेरै युवाहरूले स्वयम्सेवा समेत गरेका थिए ।
तपाई जागरुक युवा पनि हुनुहुन्छ के गर्दा देशको आर्थिक समृद्धि होला ?
हो, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको चिन्ता आफू जन्मेको भूमिको वकासका लागि हुन्छ । नेपाली समाजले विदेश बस्नेलाई देश बिर्सने भनिएपनि उनीहरूको मनन चिन्तन जति नेपाली माटोमा पुगेको हुन्छ । देश, मुटुमा बसेको हुन्छ । मेरो बिचारमा तत्काल पर्यटन क्षेत्रबाट पनि देशको आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् । विश्वको सबैभन्दा अग्लो सगरमाथा हाम्रै देशमा छ र विश्वको सबैभन्दा होचो ठाउँपनि हाम्रै देशमा छ । हिन्दु पर्यटकका लागि पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ लगायतका धेरै महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू छन् । त्यसमा थुप्रै भारतीय हिन्दु पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ । त्यस्तै सबैभन्दा ठूलो बिशेषता हाम्रो देश चारजात छत्तिस वर्णको फूलबारी हो । सबै जातजातिको आफ्नै संस्कार, संस्कृति र भेषभूषालाई सम्बद्र्धन गरेर पनि संसारभरीका पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ । यसको प्रचार–प्रसारमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले विशेष भूमिका निभाउन सक्छन् । त्यस्तै आर्थिक समृद्धिका पाटाहरू अरु पनि धेरै छन् । आफ्नै देशको स्रोत र सम्पदालाई प्रयोग गरेर देश धनी बनाउन सकिन्छ । यदि देशका राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक समृद्धिको विचार मन र मुटुमा राखेर काम गर्न सके भने १० वर्षमै देश धनी बनाउन सकिन्छ । यसमा विदेशमा रहने विज्ञ, विशेषज्ञ, मजदुर सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट जन्मभूमिको विकासको लागि हातेमालो गर्न जरुरी छ ।
अन्त्यमा नेपालमा होस् या प्रवासमा हामीले हाम्रो सन्ततिलाई दिने सम्पत्ति भनेकै संस्कृति हो । धन सम्पत्ति सबैले कमाउन सक्छन् तर पुर्खाको संस्कृति, भाषा, धर्म, रितिरिवाज कमाउन सकिन्न । त्यसैले सबै यसको संरक्षणमा लाग्नु पर्ने आजको आवस्यकता हो । अब यसलाई पुरानो पुस्ताबाट नयाँ पिंढीमा हस्तान्तरण गर्न जरुरी छ ।